कोरोना लामो समयसम्म निको भएन भने के हुन्छ ? Canada Nepal
कोरोना लामो समयसम्म निको भएन भने के हुन्छ ?
'दीर्घ कोभिड' अर्थात् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दीर्घ प्रभावका कारण मानिसहरूलाई चार भिन्न समस्या पारिरहेको हुनसक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ।
उनीहरूलाई थप सहयोगको खाँचो छ - अनि उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि थप जानकारी हुन जरुरी छ।
तर यो रिपोर्टका अनुसार हजारौँ मानिसहरू "निरन्तरको कोभिड" बाट ग्रस्त भएका छन्।
अध्ययनले भनेको छ "निरन्तर कोभिड-१९ को निदान" सम्बन्धी तरिका निर्माण गरेर मानिसहरूलाई सहायतामा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ।
"के प्रष्ट भइरहेको छ भने कतिपय मानिसका निम्ति कोभिड-१९ को सङ्क्रमण एउटा दीर्घकालीन रोग हो," रिपोर्टमा उल्लेख छ।
"कतिपयका निम्ति यो अवस्था उनीहरूको अस्पताल बसाइसँग सम्बन्धित छ, तर अन्य कतिपयले भने प्रारम्भिक सङ्क्रमण साधारण भएको र घरमै निको भएको तर पछि विस्तारै लक्षण कडा हुँदै गएको बताइरहेका छन्।"
"हामीलाई अब थाहा छ कि कतिपय मानिस जसलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको पनि पत्तो भएको थिएन उनीहरूलाई यसको दीर्घ प्रभाव हप्तौँसम्म भेन्टिलेटरको सहारामा बाँचेकामा भन्दा पनि ज्यादा देखिएका घटना पनि छन्," उनले भनिन्।
"अघिल्लो दिन बिउँझने बित्तिकै रिँगटा लाग्यो र बेहोस भएँ। अस्पतालमा पुग्नु पर्‍यो," उनले भनिन्।
"अधिकांश मानिसहरूलाई साधारण लक्षण भनिन्छ। तर यथार्थमा ती साधारण होइनन्। हामीलाई सहयोगको खाँचो छ," उनले भनिन्।
"हामी दुवै बिरामी भएपछि हामीले इच्छापत्र पनि बनायौँ। डरलाग्दो थियो।"
"हाम्रो उद्देश्य भनेको यो अध्ययनलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपयोग गरेर बिरामीहरूको अनुभव बुझ्न मद्दत पुगोस् भन्ने हो ताकि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने उपचार, सेवा र सहयोगमा पहुँच मिलोस्," डा. म्याक्सवेलले भनिन्।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
कार्तिक १, २०७७ शनिवार १७:५४:४३ बजे : प्रकाशित